Profaịlụ Aluminium maka Industriallọ Ọrụ mmepụta ihe, ndị na - eweta ya - Profaịlụ Aluminom nke China maka ndị na - emepụta ụlọ ọrụ
FOEN bụ nnukwu ụlọ ọrụ zuru oke, ọkachamara na mmepụta nke profaịlụ aluminom, sistemụ windo, ọkpọkọ nke igwe anaghị agba nchara na ngwa mma mgbidi. Kingnye ọkwa n'etiti China Top 5 Aluminom Profaịlụ Emeputa.
Sistemụ profaịlụ aluminom extrusion nke T-slot
Sistemu profaịlụ nke ihe ngbanye emeputa ihe ndozi T-slot nke ndi tinyebere n’elu igwe igwe, aluminium, ulo oru ugboala, ihe ndi eji eme ihe, usoro ihe eji ebu ihe na nchedo igwe na ihe nchedo igwe. Aluminumlọ aluminom modular na-enye mgbanwe na arụmọrụ dị elu yana mkpesa anya na ịdị ọcha nke elu anodized.
Profaili Aluminom Anodized maka Oru di iche iche.
FOEN Aluminom nwere teknụzụ mmepụta dị elu dị elu.T5 ọgwụgwọ ọkụ bụ nhọrọ kachasị mfe maka ngwaahịa anyị. Enwere ike ịnwe ikuku site na ikuku ma emesịa ịka ochie na oke okpomọkụ.T6 ọgwụgwọ kpo oku na-eji mmiri oyi na-emeju iji gboo mkpa ndị siri ike. .
6063 Aluminium profaịlụ maka Industrial
Otu ndi okacha amara iji hu ihe banyere ahia
Companylọ ọrụ anyị nwere ihe karịrị afọ 32 nke profaịlụ profaịlụ aluminom ma anyị nwere ndị ọrụ 3500 gụnyere ndị ọrụ inyocha 40 na nka. ndị ahịa ghọtara usoro ụlọ ọrụ dị elu dị elu na-agbanwe agbanwe ma na-ahọrọ mgbe niile ịzụta ngwaahịa anyị. Enyere akara ngosi ahia anyi “FOEN Brand” bu ihe ama ama ama na China.
Anyị nwere ndị otu R&D nwere aka ịchepụta akụkụ maka omenala maka mkpa mkpochapụ gị, ma anyị nwere ọtụtụ akpụ akpụ emebere nke nwere ike ịchekwa ọnụ ahịa gị na oge gị. Anyị na-enye ọrụ ODM / OEM, CAD Drawing na mold design base on your sample. Daysbọchị 10-15 maka ịkpụzi na nnwale nnwale, na ọnụ ahịa ịkwụghachi ụgwọ. Nyocha nke Mosis na nnwale nyocha tupu mmepụta oke.